Ganaaxa ama ciqaabta tirada badan waxaa marmar miro fiican dhala, adigoo waqti aan dheereyn ama badneyn aad qolka ku xakameyso, waxaan arakay iney waalidiin badan ay sameeyaan xakameynta caruurta ee qolka, laakiin aad aragto in caruurtii ama cunugii lagu xakameeyay qolka ay oohin qeylo dheylo dheer ay waalidka dhegahooda dhibo (reerkoo dhan ay oohintaas saameyn ku sameyso), oohin taasoo socoto waqti badan. Ama waxaa dhacdo inuu alaabta qolka taaal tuur tuuro!
Udiidida ama ka qaadida wax yaabaha muhiimka u ah oo markasto loo isticmaalin ganaax, waxaa loo adeegsadaa caruurta waaweyn, waxey noqotaa mid saameyn weyn oo isbedel leh ku dhaliso oo uu ilmihii fahmo qaladkiisa, uuna ku barto xaqa.
Barida dhaqanka wanaagsan (Edab barida caruruurta) waxaa aas-aasa u ah Jaceyl iyo isqadarin ka dhaeeya reerka oo dhan yar iyo weynba. waxaana lagama maarmaan ah isku fikrada adag ee aabbaha iyo hooyada.Xalka ugu weyn ee waalidka- waa Deganaan i caqli inuu u sharxo ilmaha, waxa looga baahanyahay, inuu ku beero in in uu`u dhaqmaayo sameynnaayana sax. badanaa arintaan caruurta ma`awoodaan inta badan ay isku dayaan waa inta badan ay dareemaan tabar dar. Marka uu waalidka ka qaldamo tarbiyada caruurta, waxaa muhiim ah inuu caawimaad ama talo weydiisto dadka aqoonta u leh tarbiyada caruurta, kuwaasoo aqoon buuxda u leh Bisaqooligiga koritaanka ilmaha. Mope ry waxaad kaheleysaa talo buuxda.
Xoogaa talooyin ah tarbiyada. 10 qaacido waaliidka
1. Ha sugin in cunugaaga uu noqdo adigoo kale ama sidaad rabto. Ka caawi inuu noqdo siduu asaga yahay.
2. Ha umaleyn in aad adiga iska leedhay ilmaha: Ilamaha Illaah aa iska leh, u tarbiyeesho ilmaha iney kuu soo duceeyaan markaad dhimado.
3. Ha ku dhego hadlin iney kuu gudaan waxaad u qabatay oo dhan una qabatid. Nolol baad siiyay, asagana nolol buu siin doonaa qofkale, ii qofkii kale saas oo kale waana mahadcelinta ugu weyn uu waalidku helo.Nolosha degan oo jaceylka leh ee uu ku koro ilmaha waxey dhashaa reer caafimaad leh caruur caafimaad leh oo is jecel.
4. Ha u gudbin caruurta xanaaqaaqa nololeed, colaadaada, si ay noloshiina u saameyn mirahaa abuurataa cuntaa.
5. Dhibaatooyinka ilmaha ha ka sooqaadin wax fudud, qofwalba dhibkiisa waa u weyn yahay, u qiro in dhibkiisa weyn yahay lana wadaag, dhibka heyystaa wuxuu lamid yahay midka adiga ku heysta, waxaa dhacda mar mar in xaqiiqadii dhibka heystauu kaaga ka culusyahay.
6. Ha`yasin ilmahaaga, Ha`isla barbardhigin caruurta kale.
7. Ha`iskalifin hadaad awoodin in aad wax uqabato cunugaaga, iskalif markaad awoodo oo aad waxba u sameyn karin.
8. Garo inad jeclaatid caruurta kale. Marnaba ha ku sameyn waxaadna rabin in lagu sameeyo cunugaaga.
9. Jeclaaw oo haka qalbi jabin ilmahaaga haduu fahankiisa yaryahay, haduu nasiibkiisa xumaado, caruurta qaan gaaray oo kula nool la sheekeyso, intey caruurta kula joogaan waa farxad.
10. Uducee caruurtaada, hadaad tarabiyadooda kala kulanto welwel, rabi u tuug adigoo leh Illaahow waad i aragtaa inaan udadaalaayo caruurteyda allow adaa igu aamaaneeyay ee Allow ii toosi u badkeyga. (Aamiin)